Bit By Bit - Mass ngokubambisana - 5.5.4 Nika amandla ukumangala
Manje ukuthi une abantu heterogeneous besebenza ndawonye inkinga okunenjongo zesayensi, futhi une ukunakekela zayo zigxile lapho kungaba wusizo kakhulu, qiniseka dedelani ukuba kukumangaze. Kuyinto pretty cool ukuthi ososayensi isakhamuzi baye esinelebuli ye imithala at Galaxy Zoo futhi eligoqiwe amaprotheni at Foldit. Kodwa-ke, yilokho kwalawa maphrojekthi badalwa ukunika amandla. Kuyini amazing ngisho nangokwengeziwe, ngombono wami, wukuthi miphakathi nemiphumela zesayensi ezazingaphansi unanticipated ngisho nangamagama Abadali zabo. Ngokwesibonelo, umphakathi Galaxy Zoo uye wathola futhi isigaba esisha into yezinkanyezi ukuthi bayibiza ngokuthi "Peas Green."
ekuseni kakhulu kule phrojekthi Galaxy Zoo, abantu abambalwa yayibone lezinto engavamile eluhlaza, kodwa nesithakazelo kubo acacisa lapho Hanny Von Arkel, uthisha Dutch esikoleni, waqala intambo in the Galaxy Zoo yokucobelelana ngolwazi nge isihloko esimnandi athi: "Sinike Peas a . Chance "intambo, elaqala August 12, 2007, waqala amahlaya:" Ingabe lokuqoqa kubo for dinner "," peas stop ", njalonjalo?. Kodwa, maduzane nje ezinye Zooites baqala ukuthumela peas yabo siqu. Ngokuhamba kwesikhathi izikhala waba lobuchwepheshe futhi okuningiliziwe kuze izikhala esinjengalesi waqala ukubonisa: "Iphuzu OIII (the 'ipea' line, at 5007 angstrom) ukuthi uyalilandela amashifu ekufezeni ebomvu njengegazi z uyanda futhi ubalekela ngezansi-bomvu Kodwa cishe ngo-z = 0.5, okungukuthi ongabonakali " (Nielsen 2012) .
Ngokuhamba kwesikhathi kancane kancane Zooites base isimo futhi systematizing kokuma kwabo peas. Ekugcineni, ngo-July 8, 2008-cishe unyaka wonke kamuva-Carolin Cardamone, i astronomy owaphothula umfundi baseYale kanye ilungu leqembu Galaxy Zoo, wajoyina intambo ukuze basize ekuhleleni "Pea Hunt." Umsebenzi Ngini ukhulume ngomdlandla Kwaqubuka kwathi ngo-July 9, 2009 iphepha kwase kunyatheliswe kuyi izaziso Monthly Royal Astronomical Society ne esithi "Galaxy Zoo Green Peas: Discovery a Class of Compact Extremely Star-Owenza Galaxies" (Cardamone et al. 2009) . Kodwa, baba nesithakazelo esikhulu kule peas awuphelelanga lapho. Ngemva kwalokho, baye baba ngendaba ucwaningo olwengeziwe nge-astronomer emhlabeni wonke (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Kwabe sekuthi ngo-2016, eminyakeni engaphansi kwengu-10 ngemva post sokuqala ngumuntu Zooite, iphepha enyatheliswa Emvelweni ehlongozwayo Peas Green njengoba incazelo kuyenzeka iphethini ezibalulekile futhi okuxakayo in the ionization yokuba khona kwezulu nomhlaba. Konke lokhu kwaba wake wacabanga lapho Kevin Schawinski Chris Lintott sokuqala saxoxa Galaxy Isiqiwu sezilwane e endaweni yokucima Oxford. Ngenhlanhla, Galaxy Zoo yenza la izinhlobo lezimanga ezingalindelekile ngokumane ngokuvumela ababambiqhaza ukuba ukuxhumana nabanye.